Study in Japan - Neo Mars International
သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ မရှိသလောက်ရှားပါးပေမယ့် နည်းပညာနဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း စီးပွားရေးအင်အားကြီး စက်မှုနိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့တာဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေး စနစ်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပညာရေးစနစ်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျိုးထောင်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အကျိုးရလဒ်တွေအနေနဲ့ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် နည်းပညာများ၊ ဆေးပညာများ၊ နည်းလမ်းများကို ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေ၊ ကြာရှည်ခံပြီး စျေးချိုတဲ့ ကားတွေ၊ ကင်ဆာရောဂါအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနတွေ စသဖြင့် ကမ္ဘာအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် လေ့လာတီထွင်မှုတွေဟာလည်း ပညာရေးရဲ့ အသီးအပွင့်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အတွေးအခေါ်ယူဆချက် အသစ်အဆန်းတစ်ခုခုကို လူတွေအကျိုးရှိစေမယ့် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ အလေ့အထဟာ ဂျပန်ယဥ်ကျေးမှုထဲမှာလည်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်ထဲမှာ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ သင်ရိုးတွေထဲမှာ လူသားချင်းဆက်နွယ်မှုတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ပေါင်းစည်းမှုတွေကို စနစ်တကျ ထည့်သွင်းကျင့်သုံးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ယူသင့်သလဲ?
ကွဲပြားတဲ့ ယဥ်ကျေးမှု ပတ်ဝန်းကျင်
ဖူဂျီ၊ Washoku နှင့် Omotenashi
ပင်လယ်ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကွဲပြားတဲ့ ရာသီဥတု (၄) မျိုးရှိပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် Fuji တောင်၊ Himeji ရဲတိုက်၊ Itsukushima ဝတ်ကျောင်းတော်လိုမျိုး သွားရောက်လည်ပတ်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေလည်း ပေါများပါတယ်။
ဥတုရာသီအလိုက် စုံလင်လှတဲ့ သဘာဝထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ရိုးရာနည်းကျ ဂျပန်အစားအစာတွေကိုတော့ Washoku လို့ခေါ်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်လျော်သလို ကိုင်တွယ်မရတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုအထိမ်းအမှတ်တစ်ရပ်အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
ဒီလိုစားသောက်နေထိုင်မှုတွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးရဲ့ ပျှမ်းမျှသက်တမ်းဟာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုတော့ အလုပ်ကြိုးစားပြီး စည်းကမ်းသေဝပ်ကြတယ်လို့ ကမ္ဘာကမြင်ပါတယ်။
ဧည့်သည်တွေကို အိမ်ရှင်က အမြဲဦးစားပေးတတ်တဲ့ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကိုတော့ “Omotenashi” လို့ခေါ်ပြီး ဂျပန်လူမှုဘဝယဥ်ကျေးမှုမှာ အခရာ အကျဆုံးနေရာကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကနေလာရောက်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ဂျပန်နေ့စဥ်ဘဝထဲမှာပဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပညာသင်ကြားနိုင်ကြပါတယ်။
ကျည်ဆံရထား၊ ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက်ခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရာဇဝတ်မှုတွေ နည်းပါးလွန်းတဲ့ အချက်ကိုလည်း ကမ္ဘာက သတိပြုမိကြပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုခုပျောက်ရှခဲ့ရင်တောင် များသောအားဖြင့် အကောင်းအတိုင်း ပြန်ရတာများပါတယ်။
အချိန်မှန်လွန်းတဲ့ အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထိပ်တန်းလို့ ဆိုရလောက်အောင် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး မြန်ဆန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်ဟာ အချက်ကျကျလည်ပတ်နေပြီး ဖျားနာခဲ့ရင်တောင် ကမ္ဘာ့အဆင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစွာနဲ့ ခံယူနိုင်မှာပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံကို မရောက်ခင်တုန်းက တွေးပြီး စိတ်ပူခဲ့ရတဲ့ သူတွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ခြေအချမှာ သူတို့ရဲ့ ဒုတိယအိမ်လို့ စိတ်ထဲက သတ်မှတ်မိလောက်အောင် တွယ်တာမိသွားတတ်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ
နိုင်ငံပေါင်း (၁၇၀) ကျော်မှ လာရောက်ကြတဲ့ ကျောင်းသားများ
နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း (၂၂၀,၀၀၀) ခန့်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဆီမှာ ပညာသင်ကြားနေလျှက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း (၁၇၀) ကျော်ကနေ လာရောက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ယဥ်ကျေးမှုတွေကိုပါ ထဲထဲဝင်ဝင်သိလာရုံသာမက၊ နိုင်ငံတကာက မိတ်ဆွေများနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာတွေးတောပြောဆိုခွင့် စတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အာမခံထားတဲ့ နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို ကျောင်းသွားတက်တော့မယ်ဆိုရင် အောက်က အချက်လေးတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ဖို့တော့ လိုအပ်မှာပါ။
မိသားစုနဲ့ တိုင်ပင်တာမျိုး၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဂျပန်ပြည်တွင်းမှာ ရောက်နေတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေဆီကနေ အကြံဉာဏ်ယူတာမျိုးတွေကိုပါ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြံဆိုတာဟာ လူတွေရဲ့ တွေ့ကြုံလာခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအပေါ်မှာလည်း အခြေခံတာမို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြံပေးတာချင်းတော့ တူကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပုံလေးတွေကို နှိပ်ပြီး အသေးစိတ် ဆက်လက်ဖတ်ရှုသွားနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်ကို ကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာအတွက်ပါလဲ?
ကိုယ် မျှော်မှန်းထားတဲ့ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းအိပ်မက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ ပညာအရည်အချင်းတွေက ဘာတွေလဲ?
ဂျပန်မှာ ဘာသာရပ်မျိုးစုံ၊ ကျောင်းတွေအများအပြားရှိတဲ့အထဲက ဘယ်တစ်ခုက ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတာပါလဲ?
ကိုယ်တက်မယ့် ကျောင်းဟာ ဘယ်လောက်ကြာအောင် တက်ရမလဲ?
ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်ကို ဝင်ရောက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာပါလဲ?
ကျောင်းအပ်ရမယ့် အချိန်ဇယားက ဘယ်တော့လဲ? ပြင်ဆင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ?
လေယာဥ်လက်မှတ်၊ နေစား စားရိတ်၊ ကျောင်းလခ၊ အပိုသုံး၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ် ဝင်ငွေ၊ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး၊ အိမ်ကပို့ပေးတဲ့ ငွေကြေး စတာတွေကို တွက်ချက်ပြီးပြီလား?